Iindaba -Izakhono zokuthenga izinto ezenzekelayo
Izakhono zokuthenga iinxalenye zemoto
1. Khangela ukuba indibaniselwano egudileyo. Ngexesha lokuthuthwa kunye nokugcinwa kwezinto ezingafunekiyo, ngenxa yentshukumo kunye nokudibana, i-burr, i-induction kunye nokwaqhekeka kuhlala kwenzeka kwinxalenye edibeneyo
Umonakalo okanye ukuqhekeka, okuchaphazela ukusetyenziswa kwamalungu. Nika ingqalelo ukujonga xa uthenga.
2. Jonga ukuba uphawu lwentengiso lugqityiwe na. Umgangatho wokupakisha wangaphandle weemveliso eziyinyani ulungile, ukubhala ngesandla kwibhokisi yokupakisha kucacile kwaye umbala ogqithisileyo uqaqambile. Ibhokisi yokupakisha kunye nengxowa kufuneka iphawulwe ngegama lemveliso, imigaqo kunye nemodeli, ubungakanani, uphawu lwentengiso olubhalisiweyo, igama lefektri, idilesi kunye nenombolo yomnxeba, njl.njl. Abanye abavelisi benza amanqaku abo kwizixhobo. Ezinye izinto ezibalulekileyo, ezinje ngomvelisi, umhambisi, impompo yenaliti, njl njl, zikwanazo nezixhobo zemiyalelo, isatifikethi kunye netywina lomhloli ukukhokela abasebenzisi ukuba bazisebenzise kwaye bazigcine ngokuchanekileyo. Xa uthenga, kuya kufuneka uyiqaphele ngononophelo ukuthintela ukuthenga izinto ezingezizo ezingezizo,
3. Jonga ukuba iindawo ezijikelezayo ziyatshintsha na. Xa uthenga impompo yeoyile kunye nezinye iindawo ezijikelezayo zenkonzo, jikelezisa ishaf shaft ngesandla, ekufuneka ibhetyebhetye kwaye ingabinakho ukuma. Xa uthenga iibheringi eziqengqelekayo, inkxaso iringi ethwele ngaphakathi ngesandla esinye kwaye ujikeleze iringi yangaphandle ngesinye isandla. Iringi yangaphandle kufuneka ikwazi ukujikeleza ngokukhawuleza nangokukhululekileyo, ize iyeke ukujikeleza ngokuthe chu. Ukuba iindawo ezijikelezayo azisebenzi kakuhle, oko kuthetha ukuba umhlwa wangaphakathi okanye i-deformation, musa ukuthenga.
4. Jonga ukuba umphezulu okhuselayo ukwimo elungileyo na. Uninzi lwamalungu afakwe isambatho sokukhusela kumzi-mveliso. Umzekelo, isikhonkwane sepiston kunye ne-bush bush zikhuselwe yi-parafini wax; Umphezulu womsesane we-piston kunye ne-cylinder liner ugalelwe i-oyile ye-antirust, kwaye ivelufa kunye ne-piston zisongelwe ngephepha lokusonga litywinwe ngeplastiki emva kokuntywiliselwa kwioyile ye-antirust. Ukuba umkhono wetywina wonakele, iphepha lokumakisha lilahlekile, ioyile ye-antirust okanye iparafini ilahlekile, kufuneka ibuyiselwe endaweni yayo.
5. Jonga ubukhulu bejiyometri ukujongwa. Amanye amalungu kulula ukukhubazeka ngenxa yokuvelisa okungafanelekanga, ukuthuthwa kunye nokugcinwa. Xa ujonga, amalungu e-shaft anokuqengqeleka kwipleyiti yeglasi ukuze abone ukuba akukho kuvuza na kulungelelwano phakathi kwamalungu kunye nembasa yeglasi yokugweba ukuba igobile na; xa uthenga ipleyiti yesinyithi okanye ipleyiti yokuxubana nepleyiti eqhutyiweyo, ungayibamba ipleyiti yesinyithi kunye nembasa yokhuphiswano phambi kwamehlo akho ukuze ubone ukuba ingaba ijikekile na. Xa kuthengwa itywina leoyile, isiphelo sebhokisi yeoyile enesakhelo kufuneka ijikeleze, enokulingana neglasi ethe tyaba ngaphandle kokugoba; Umda wangaphandle wesitywina seoyile esingenasiphelo kufuneka uthe tye kwaye ukhubazeke ngesandla. Kuya kufuneka ikwazi ukubuyela kwimeko yayo yantlandlolo emva kokuyikhulula. Ekuthengweni kweentlobo ngeentlobo zeepads, kuya kufuneka kuthathelwe ingqalelo ukujonga ubungakanani bejiyometri kunye nemilo
6. Jonga ukuba amalungu eendibano awekho na. Amalungu endibano yesiqhelo kufuneka agqitywe kwaye ahambisane nokuqinisekisa ukuhlangana ngokukuko kunye nokusebenza kwesiqhelo. Ukuba ezinye iinxalenye ezincinci kwezinye zeendibano zilahlekile, iinxalenye zendibano azizukusebenza okanye zikhutshwe.
7. Khangela ukuba umphezulu wamalungu umhlwa. Umphezulu wamalungu abaza kuzisebenzisa afaneleke ngokuchanekileyo kwaye agqibe ngokugqibeleleyo. Okubaluleke ngakumbi ukuba iindawo zokungcebeleka, kokukhona kuchanekile ngokuchanekileyo, kwaye kokukhona kungqongqo ngakumbi ukurusa umhlwa kunye nokupakishwa kokulwa umhlwa. Nika ingqalelo ukujonga xa uthenga. Ukuba amalungu afunyenwe enendawo ezinomhlwa, amabala ombungu okanye iinxalenye zerabha ziqhekekile kwaye zilahle ukomelela, okanye kukho iindawo ezicacileyo zokujika izinto kwiphepha lejenali, kufuneka zitshintshwe
8. Jonga ukuba iinxalenye ze-bonding zikhululekile na. Kwizinto ezincedisayo ezenziwe ngamacandelo amabini okanye nangaphezulu, iinxalenye zicinezelwe, zincanyathiselwe okanye zidityaniswe, kwaye akukho kuvuleka kuvunyelwe phakathi kwazo. Umzekelo, i-pump pump plunger kunye nengalo elawulayo zidityaniswe ngokucinezela, ivili eliqhutywa yiklatshi kunye neplate yentsimbi iyariveliswa, ipleyiti yokukhuhlana kunye neplate yentsimbi iyarishwa okanye incanyathiselwe; Isakhelo sephepha lokucoca iphepha sincanyathiselwe kwiphepha lokucoca ulwelo; Iincingo zocingo zezixhobo zombane zenziwe nge welding. Ukuba kukho nakuphi na ukukhululeka xa kuthengwa, s